​नेपाली आकाशमा थपिए दुई एयरलाइन्स, जान्नुहोस् कुन–कुन हुन् ?
नेकपा सुनसरीले बाँड्यो नयाँ जिम्मेवारी
गुणस्तरीय दुग्ध उत्पादन गर्दै प्रकाशपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी
इटहरीभरीको जग्गाजमिन अब डिजिटल प्रणालीमा, वडा नं. ७ बाट नापी सुरु
आज माघे सक्रान्ति, तरुल र लड्डु खाएर मनाइदै
प्रदेश १ मा भोलि सार्वजनिक विदा
इटहरीको कोशी कलेजमा अध्ययनरत १८ वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या
​नेपाली आकाशमा थपिए दुई एयरलाइन्स, जान्नुहोस् कुन–कुन हुन् ?
बिहीबार १७, जेठ २०७५
काठमाडौं । नेपाली आकाशमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स थपिएका छन् । थाइल्याण्डको थाइ लायन एयर र ओमनको सलाम एयरले उडान सुरु गर्न लागेका हुन् ।
थाइल्याण्डको थाइ लायनको ९० प्रतिशत प्रक्रिया पूरा भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुबास झाले एक महिना भित्र थाइ लायनले नेपालमा उडान भर्ने बताए ।
एयर कन्जेशन कम गर्नका लागि थाइ लायनले प्राधिकरणलाई दिउँसो १ः३० अथवा २ः३०को स्लट माग गरेको तर एयरलाइन्सको लागि ५ः०० देखि ६ः०० बजेको स्लट छुट्टाइएको झाले जानकारी दिए ।
थाइ लायन एयरले साप्ताहिक रुपमा सातवटा नियमीत उडान भर्ने प्रस्ताव गरेको छ । थाइ लायनको एक सय ८९ सिट युक्त बोइङ ७३७–८०० जहाजले बैंककको पुरानो विमानस्थल ‘दोन मुयेङ’ देखि नेपाल सीधा उडान गर्नेछ ।
ओमानको सलाम एयरले पनि नेपाल उडानका लागि आवेदन दिएको झाले बताए । सलाम एयरले दुई महिना अघि निवेदन पेश गरेपछि सम्पर्कमा भने नआएको झाले जानकारी दिए । सलाम एयरले राती १२ बजेपछि उडान गर्ने प्रस्ताव गरेमा कम्पनीलाई इजाजत दिइने झाले बताए ।
हाल सलाम एयरले ओमानको मस्कट, सलल्हा र सोहरबाट आन्तरिक उडान भर्दै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान युएइको दुबाइ, साउदी अरेबीयाको जेद्दा, पाकिस्तानको शैलकोट र कराँची, जर्जियाको त्बील्सी र अजरबैजानको बाकुम लगायत क्षेत्रमा गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले सातवटा गन्तब्यमा साप्ताहिक १ सय १६ वटा उडान भर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म चार लाख यात्रुले सेवा लिइसकेका छन् ।
सलाम एयरले सन् २०१७/ ३० जनवरीबाट आफ्नो व्यवसायिक उडान सुरु गरेको हो ।कम्पनीले हाल १ सय ७४ सिटयुक्त एयरबस ए३२० उडन गर्दै आएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राती १२ बजेदेखि तीनबजेसम्म नौ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण हुनसक्ने क्षमता रहेको झाले बताए । हालसम्म कुवेतको वातानिया एयरवेज र कतारको कतार एयरवेजले रात्री उडान भर्नका लागि इच्छा देखाएको झाले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीको एयर टिकट छ महिना अघिदेखि बुकिङ भइसक्ने हुनाले संचालनमा आइरहेका एयरलाइन्स कम्पनीले तत्काल राती १२ बजेपछिको उडान भर्न नसक्ने झाको भनाई छ ।
सार्वजनिक विद्युतीय बस ल्याइँदै
फेसबुकको विज्ञापनमा कर लगाउने तयारी
नेपाललाई २२ अर्ब दिन विश्व बैंक तयार
महिनावारीका बेला घर अगाडिबाट हिँडेको भन्दै छिमेकीले कुटे दुई महिला
अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा हराएका सात जना अझैं भेटिएनन्
मह खानुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
तिङ्लवासीले किन गरे ढुङ्गामुढा र आगजनी ?